Lolaa kaleessa Buraayyuutti kaleessa mudateen lubbuun namoota sagalii darbuun qabeenyi guddaan manca’e – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLolaa kaleessa Buraayyuutti kaleessa mudateen lubbuun namoota sagalii darbuun qabeenyi guddaan manca’e
Balaa lolaa kaleessa naannoo Buraayyuu ganda Gafarsa Noonnoo fi Gafarsa Gujee jedhamuutti mudateen lubbuun namoota sagalii darbuun qabeenyi guddaan manca’uu Waajjirri Dhimmoota Komunikeeshinii magaalichaa BBC’tti hime.
(bbcafaanoromoo)–Itti Gaafatamaan Waajjirichaa Obbo Abdallaa Tibbeessoo BBC’tti akka himaniiti, lolaa hamaa kaleessa Aaanaa Sabbataa Hawwaas ganda Jamoo jedhamu irraa gara Magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Noonnoo fi Gafarsa Gujeetti dhufeen, lubbuun namoota sagalii darbuu himuun, namootni achi buuteen isaanii dhabame barbaadamaa jiraachu himan.
Lolaan kun gaara Wacacaa jedhamu kan aanaa Sabbataa Hawwaas keessatti argamu irraa akka gara gandoota kanneeniin dhufe himan Obbo Abdallaan.
Magaalaa Buraayyuu jalaatti jiraattonni ganda Gafarsa Noonnoo fi Gafarsa Gujee jedhaman keessa jiraatan irra miidhaa guddaa geessisuu himan.
Reeffi namoota lolaa kanaan du’aniis miseensa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggootaan barbaadamee argame jedhan.
Kana malees maatiin tokko tokkos nama hanga ammaatti dhaban galmeessiisanii barbaadamaa akka jiran himan.
Haaluma kanaanis namoota eenyummaan reeffi isaanii adda baafame amaa bakka dhalootaa saanii gara godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti gaggeeffamuu himan Obbo Abdallaan.
Irra caalaan namoota lolaan kanaan fudhatees namoota hojiif godinaalee biraa irraa dhufan tahuu akka hin hafnes himaniiru.
Reeffa namoota argamanii adda baasuuf akka hojjechaa jiranis himanii, yoo eenyummaan isaanii baramu gara maatii isaaniitti gaggeessuuf jiraattota waliin tahuun bulchiinsi magaalaa Buraayyuu hojjechaa akka jiru dabalanii himaniiru
Miidhaa qabeenya irra dhaqqabe
Obbo Abdalaan lolaa kanaan qabeenyi manca’e ammaaf hin tilmaamamne jedhan. Haa tahu malee qabeenyi barbadaa’e guddaa tahuu himan.
Warshaalee gurguddaa, manneetii jireenyaa, suuqota, dhaabbilee mootummaa fi manneetiin amantaa lolaa kanaan manca’aniiru jedhan.
”Manni amantaa Kiristaanaa guddaan tokko qabeenya achi keessa jiruu fi mana barumsaa waldichaa waliin guutummaatti lolaadhaan manca’eera. Mooraan isaas fudhatameera. Qabeenyi achi keessa jirus hin hafne,” jedhan yoo haala ture himan.
Balaa lolaa Finfinnee lubbuu baraaruuf rakkoo ta’e
Malkaa Bal’ootti bokkaa cimaa roobeen maatii lama irraa namni torba du’e
Dhaabbanni fayyaa mootummaa gandicha keessa ture tokkoos guutummaan manca’uu himaniiru Obbo Abdallaa.
Manneetii jireenyaa lolaan manca’an lakkoofsaan adda baasuu bannus hedduu tahuu mirkaneesineerras jedhan.
Suuqonnii fi qabeenyi achi keessa tures guutummaan manca’uu dubbatu. Warshaaleen gurguddaan garaagaraas akkasuma manca’uu himanii humni lolaa mudatee guddaa tahuu himan.
”Horiin gaafaa, reettiin, hoolonni fi fardeen du’anii dirree keessa ciciisaa jiru.”
Konkolaataan dedebisa uummataas lolaa kanaan fudhatamee booda daandii cinatti daddarbamee akka jiru himan.
Koreen namoota miidhaman deeggaruufi deebisee akka dandamatan godhu hundaa’ee hojii eegalus himaniiru.
Obbo Abdallaan jalqaba Aanaa Sabbataa Hawwaas keessatti cabbii cimaatu roobe ture jedhanii, sanumatu gara lolaatti jiijjiramee humna guddaan dhufe jedhan.
Seenaa bulchiinsa magaalichaattis balaa guddaa akkasii arginee hin beeknu jedhan.
Balaan lolaa bara kana biyyoota Afrikaa Bahaa keessatti hammaachuu akka malu ogeessonni raaga qilleensaa himanii ture